Raysulwasaarihii Itoobiya Hailemariam Desalegn oo iscasilay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldRaysulwasaarihii Itoobiya Hailemariam Desalegn oo iscasilay
February 15, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Hailemariam Desalegn. [Sawirka: ENA]
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa sheegay in uu go’aan ku gaaray in iscasilo, sida ay ku warantay wakaalada wararka dowladda IItoobiya ee ENA maanta oo Khamiis ah.
Hailemariam Desalegn ayaa sheegay in uu mar hore gudbiyay warqadiisa iscasilaada. Isaga oo intaas ku daray in uu ka tagayo labada boos ee uu hayo oo kala ah guddoomiyaha xisbiga talada haya ee EPRD iyo raysulwasaarenimada.
Wuxuu xusay in go’aankaas uu u qaatay si xal kama dambeys ah loogu helo xaalada hadda taagan, oo ay kamidyihiin barakacyo, dhibaatooyin soo gaaray dadka, iyo kaabaysha iyo hantida oo burburay.
Hailemariam, oo sidoo kale soo noqday Wasiirka Arrimaha Dibada iyo Raysulwasaare ku xigeen, ayaa loo dhaariyay Raysulwasaare bishii September 2012, kadib markii uu dhintay Meles Zenawi.
September 8, 2016 Hal qof oo ku dhintay diyaarad yar oo ku burburtay dhulka Rift Valley ee dalka Kenya